यूरोप ट्रेन मार्ग नक्शा गाइड | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > यूरोप ट्रेन मार्ग नक्शा गाइड
पढ्ने समय:5मिनेट(Last Updated On: 07/06/2020)
हामी दृढ विश्वास छ कि रेल यात्रा सबै भन्दा राम्रो र सबै भन्दा राम्रो हो इको-मैत्री यात्रा गर्ने तरिकाहरू. अन्त गर्न, हामीले करीव दुई दर्जन संग समन्वय गरेका छौं बिभिन्न रेल अपरेटरहरू युरोपभरि तपाईंलाई उत्तम र सस्तो ट्रेन टिकटहरू ल्याउनका लागि. यसको मतलब हामी हाम्रो रेल मार्ग नक्सामा सयौं विकल्पहरू प्रदान गर्न सक्दछौं.
उच्च-गति युरोस्टारबाट शानदार स्लीपर ट्रेन मार्गहरू, हामी तपाईंलाई छैन त्यसैले सबै भन्दा राम्रो मूल्यहरु फेला हाम्रा सबै समय खर्च. अन्त गर्न, हामीले रेल मार्ग नक्शा गाईड लेख बनाएका छौं जुन तपाईंलाई हाम्रा सबै भन्दा लोकप्रिय ट्रेन मार्गहरू देखाउँदछन्. यसमा लन्डनदेखि पेरिस सम्म यात्रा समावेश छ, रोम फ्लोरेन्स, र सबैतिर बीच मा.
यदि तपाईं यहाँ आफ्नो स्टेशन देख्न छैन – चिन्ता नगर्नुहोस्! हाम्रो भागीदारी हामीलाई तपाईंले विभिन्न रेल लाइनको दायरामा टिकट पाउन अनुमति – स्थानीय मार्गहरू, अन्तर्राष्ट्रिय जडानहरू, र उच्च-गति यात्रामा सब भन्दा राम्रो सबै समावेश छन्.
त्यसैले आफैलाई केही यात्रा प्रेरणा पाउन, र तपाईं तयार हुँदा, हाम्रो खोज पृष्ठमा जानुहोस उत्तम र सस्तो ट्रेन टिकट वरपर भेट्टाउन!
हाम्रो मार्ग नक्सा हाम्रो सबैभन्दा लोकप्रिय मार्गहरूको उदाहरण:
1. लन्डन सेन्ट Pancras इन्टरनेशनल देखि पेरिस को लागि ट्रेनहरू
लन्डनदेखि पेरिससम्म पुग्न रेल युरोपको सब भन्दा छिटो हो. Eurostar द्वारा संचालित, तपाईं आफैलाई युनाइटेड किंगडमबाट फ्रान्स मात्र दुई घण्टा १ six मिनेटमा लिन सक्नुहुनेछ. यसले तपाईंलाई सुत्नको लागि पर्याप्त समय दिन्छ, ट्रेन लिनुहोस् र रमाईलो गर्नुहोस् फ्रान्सेली राजधानी को दिन यात्रा. एक बैगेट समात्नुहोस् र लुभ्रे घुम्नुहोस् – वा केवल पेरिसले प्रस्ताव गरेको सबै सौन्दर्यताको आनन्द लिनुहोस्.
लन्डन सेन्ट प्यानक्रसबाट प्रस्थानहरू नियमित रूपमा हुन्छन्, ट्रेनहरू हरेक घण्टामा दौडँदै छन्. पेरिसबाट लन्डन फर्कने सन्दर्भमा पनि यस्तै हुन सक्छ, र onboard तपाईं एक उच्च-अन्त ट्रेन मार्ग को अपेक्षित सबै शीर्ष सुविधाहरू पाउनुहुनेछ.
तपाईं पेरिस रहन हुनुहुन्छ भने, तपाईं पनि विपरीत दिशा मा यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने बिहान सबेरै लन्डन पुग्नुहुनेछ. तपाईं SoHo गर्न सक्नुहुन्छ र एक ब्रॉडवे शो लिन वा केवल केहि पब भाडिको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ. या त बाटो, ट्रेन प्रस्थान समयमा परम लचकता प्रदान गर्दछ.
2. फ्लोरेन्सबाट रोम टर्मिनीसम्म रेलहरू
इटालीका दुई शीर्ष शहरहरू, फ्लोरेन्स र रोम सयौं को घर हो पर्यटक आकर्षण हरेक प्रकारका आगन्तुकका लागि. आर्ट बुफ्स भ्याटिकन भित्तामा घुमाउन सकिन्छ सिस्टिन चैपल. Foodies को वरिपरि को ताजा भैंस मोजारेला को मजा लिन सक्छन्. जे होस् तपाईंको स्वाद, यी दुई इटालियन शहर हो शानदार ठाउँहरू एक हप्ता वा पाँच खर्च गर्न.
अझ राम्राे, फ्लोरेन्स र रोम जोड्ने रेलहरू प्रशस्त र सस्तो छन्. यात्रा केवल एक घण्टा लाग्छ र तपाईं आफ्नो विन्डोज बाहिर भव्य ग्रामीण इलाका को बोनस मिल्यो.
3. मार्ग नक्शा: रोमबाट मिलानका लागि ट्रेनहरू
हामीले रोमको बारेमा कुरा गरिसकेका छौं, तर मिलान इटालीको अर्को राम्रो शहर हो. स्याउ सुन्तलामा छन् भन्दा इटालीको दक्षिण भन्दा फरक, मिलान एक आधुनिक राक्षस हो. यसको उच्च-अन्त फैशन र उच्च-टेक घटनाहरूका लागि परिचित, शहर कुनै पनि इटालेली छुट्टीको समयमा एक रोकिनु पर्छ. जबकि मौसम भूमध्यसागरको रूपमा पर्याप्त छैन, तपाईं अझै रमाउन सक्नुहुन्छ सुन्दर वास्तुकला र बर्षको कुनै पनि समयमा संग्रहालय वा दुई पनि.
रोमदेखि मिलानको यात्रा फ्लोरेन्सको भन्दा लामो छ. डराउनु पर्दैन, तथापि, यो अझै साढे तीन घण्टा धेरै नै प्रबन्धनीय छ. त्यो मात्र तपाइँलाई अधिक समय दिन्छ दृश्यहरु आनन्द!
जेनोवा मिलान टिकटहरु
रोमदेखि मिलान टिकटहरू
मिलान टिकट बोलोग्ना
मिलान टिकटहरूमा फ्लोरेन्स
4. ह्याम्बर्गदेखि कोपेनहेगनसम्म रेलहरू
कुनै पनि युरोपियन बिदाको लागि आवाश्यक छ, ह्याम्बर्ग र कोपेनहेगन पर्यटन को लागी तपाइँको मन मा वसन्त पहिलो शहर हुन सक्दैन. शर्मको कुरा हो, हुनत, किनकि दुबै शहरहरू ईतिहास र रंगीन नहरहरूले भरिएका छन्. ह्याम्बर्ग जर्मनीको उत्तरी भागमा एउटा ठूलो बन्दरगाह शहर हो. तपाईंले यसको पहिल्यै यससँग यसको सम्बन्धको कारण सुनेको हुन सक्छ असाधारण लोकप्रिय खाना ह्यामबर्गर. रमाइलो – ह्याम्बर्गमा बस्ने मानिसहरूलाई ह्याम्बर्गर्स पनि भनिन्छ.
कोपेनहेगन, अर्कोतर्फ, डेनमार्क को राजधानी हो. जब तपाईं भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ गर्मी वा जोखिम frigid मौसम, यस समुद्रीतट शहरमा गर्न बाँकी नै छ. चम्किलो रंगका भवनहरूबाट हिप तहखाने पट्टीहरू, डेनिशको राजधानीमा लगभग सबै कुरा हुन्छ.
दुई शहर बीचको ट्रेनले केहि समय लिन सक्दछ. यात्रा छ घण्टा पछिल्लो तिर, त्यसैले मनोरन्जन ल्याउन निश्चित हुनुहोस्. भनिएको भइरहेको छ, रेलहरू आधुनिक छन् र धेरै प्रस्थानहरू उपलब्ध छन् ताकि तपाईं पछाडि बस्न र शान्तिमा आराम गर्न सक्नुहुन्छ.
5. मार्ग नक्शा: ज्यूरिखदेखि बर्नसम्म रेलहरू
यदि तपाईं कहिल्यै आल्प्स यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं ज्यूरिख र बर्न भन्दा अन्वेषण गर्न कुनै राम्रो बेस पाउन सक्नुहुन्न. दुबै मा स्थित छ स्विजरल्याण्ड को देश, यी शहरहरू एक घण्टा मात्र टाढा छन् मार्फत रेल. यद्यपि तपाईंले यो महसुस गर्नुभएन होला, बर्न स्विजरल्याण्डको राजधानी हो, जिनेभा वा ज्यूरिख जस्तो कुनै लोकप्रिय शहरहरू मध्ये कुनै होईन. यो शहरले एक लाख भन्दा बढी जनसंख्याको घमण्ड गर्छ र सुरम्य सुन्दरताले भरिएको छ.
यसैबीच, ज्यूरिख यसको बैंकिंग लागि प्रसिद्ध छ – यद्यपि तपाईले यसको भवनहरू भन्दा यसको लेकसाइड स्थानबाट आफूलाई प्रविष्ट गर्नुभएको पाउनुहुनेछ. शहर स्थायी रूपमा ओभरको लागि बसोबास गरिएको छ 2,000 वर्ष र करीव करीव पाँच सय हजार मान्छे को हुन्छन्.
ट्रेन प्रस्थानहरू नियमित र आधुनिक ट्रेनहरू द्वारा संचालित हुन्छन्, यद्यपि तपाईंसँग यति छोटो यात्राको साथ यसका बारे जानबुझ गर्न धेरै समय हुँदैन. नि: शुल्क वाइफाइमा जडान गर्नुहोस्, थोरै ब्राउज गर्नुहोस्, र त्यसपछि तपाईले सक्नुभयो – यात्रा गर्न उत्तम तरिका!
ज्युरिख बर्न टिकटहरू
जिनेभा बर्न टिकटहरू
बर्न टिकटमा Interlaken
ज्यूरिखदेखि ह्याम्बर्ग टिकटहरू
धेरै यूरोपभरि साझेदारहरूको दायराको साथ, तपाईलाई मनपर्ने मार्ग खोज्न बाध्य हुनुहुन्छ. चाहे तपाईं स्थानीय विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ वा जीवनकालको ट्रान्सकन्टिनेन्टल यात्राको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ, संग छडी एक ट्रेन सेव सबै भन्दा राम्रो टिकट विकल्पहरू उपलब्ध हुन सर्वोत्तम मूल्यहरूमा उपलब्ध.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “यूरोप ट्रेन मार्ग नक्शा गाइड” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र हामीलाई क्रेडिट दिन सक्छ यो ब्लग पोस्ट गर्न लिंक. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-train-route-maps-guide%2F%3Flang%3Dne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
EuropeTraveling eurotrip longtrainjourneys TrainRoutes रेल यात्रा travelinspiration tripinspiration
सर्वश्रेष्ठ चिज युरोप प्रस्तुत छ के छ
ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, यात्रा युरोप
5 युरोप मा बच्चाहरु को लागि सबै भन्दा राम्रो आकर्षण
ट्रेन यात्रा, ट्रेन यात्रा बेल्जियम, ट्रेन यात्रा ब्रिटेन, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा इटाली, रेल यात्रा गर्नुभएको नेदरल्यान्ड्स, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप
इटाली ट्रेन स्टेशन नजिकै सर्वश्रेष्ठ होटल